Vietnam: Fandoroana Tena Ho Fanoherana Ny Kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2011 16:33 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Araka ny ambaran'ny bilaogy Danlambao (izay midika hoe olon-tsotra manao gazety), tamin'ny 17 Febroary tamin'ny 12 ora sy sasany antoandro no nitranga ity fandoroana tena nataon”i Son ity, teo ivelan'ny birao monisipalin'ny tanàna fahadimy lehibe indrindra any Vietnam. Vao maraina tamin'io andro io dia tonga tao amin'ny Komitim-Bahoaka i Son hanao fanohanana ny amin'ny nahazo azy. Rehefa nandà tsy hihaino ny fangatahany ireo manampahefana, dia nandrehitra ny tenany niaraka tamin'ilay kodiarandroany teo amoron-dàlana teo ivelany teo ilay injeniera tanora.
Tieu Dieu, mpampiasa Facebook, dia nandefa sary tany anaty aterineto.
Nandritra izany, nisy ny tatitra hoe nandefasan'ireo manampahefana polisy manao fanamiana sivily ny teny ivelan'ny trano fonenan'ny fianakavian'i Son ary noferana ny fahafahan'ny fianakaviany mandray mpitsidika.
Da Nang, any amin'ny morontsiraka afovoany any Vietnam, dia ao anatin'ny firoboroboan'ny asa fanorenana goavana tokoa amin'izao. Natomboka tamin'ny 2009, Cau Rong dia tetezana lavabe mirefy 667 metatra eo an-dalam-panamboarana ao amin'ny reniranon'i Han. Milaza ho efa nanonitra araka ny tokony ho izy sy nanome toeram-ponenana ho an'ireo mponina tao an-toerana ny manampahefan'ny tanàna.
Tao anatin'ny taona vitsy farany, maro ireo tantsaha sy mponina an-drenivohitra tao Da Nang sy nanerana an'i Vietnam no nitaraina mikasika ireo fakàna tany ary nikarakara hetsi-panoherana madinidinika.